Ra’isulwasaarha Somalia oo maanta gudoomiyay shir gaar ah oo ka mid ah madasha amniga qaranka. – The Voice of Northeastern Kenya
Ra’isulwasaarha Somalia oo maanta gudoomiyay shir gaar ah oo ka mid ah madasha amniga qaranka.
Star FM February 7, 2018
Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa shir guddoominaya Fadhi ka mid ah Shirka Amniga Qaranka oo u dhexeeya madaxda Dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamul Goboleedyada, waxaana looga hadlayaa hanaanka ay u dhaceyso doorashada Soomaalia ee sanadka 2020 iyo dib u eegista lagu sameynayo Dastuurka qabyada ah.
Madashaan gaarka ah Waxaa ka qeyb galaya Ra’iisul wasaare ku xigeenka Soomaalia Mahdi Maxamed Guuleed, dhammaan Madaxda maamul Goboleedyada, Guddoomiyaha Gobolka Banaadir, wasiiro iyo Lataliyeyaal Arimaha amniga iyo doorashooyinka ah.
Shirka Golaha Amniga Qaranka oo maalintii labaad ka socda Magaalada Muqdisho ayaa noqonaya midkii 6-aad ee Goluhu yeesho tan iyo markii lagu dhawaaqay, waxaana la filayaa inay kasoo baxaan qodobbo ay ku xusan yihiin waxyaabihii la isla meel dhigay, wallow wadamad abeesha caalamka ee arimaha Soomaliya taageera ay sheegeen in badanaa shirarka noocaan ah aysan waxba soo kordhinayn maadaama sida ay sheegeen inanaan la dhaqan galin waxyaabaha looga hadlo kulamada madaxda Somalia.
Madaxweynaha Jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa shalay furay shirka amniga qaranka oo looga hadlayo Xaaladda guud ee Amniga Soomaalia, waxyaabaha ka hirgalay qodobadii ka soo baxay shirarkii hore iyo waxyaabaha aan suuro galin horayna loogu heshiiyay.
Muddada ay socdaan kulamadaan waxaa dib u eegis lagu sameeyaa xaaladda amniga dalka Soomaalia iyo Ciidanka Xoogga, iyadoona la gorfeynayo qorshaha sadexda bilood ee soo socota iyo arrimaha xoogga la saarayo.
← AL-shabaab oo sheegtay weerar xalay lagu qaaday saldhig ku yaala magaalada Boosaaso.
Mrs Miguna speaks her husband deportation →